Abdi Omar Bile, Author at Puntland Mirror Believable Media Website - Page 68 of 70
[ March 25, 2019 ] Saahid Mohamoud Ali elected as Galkayo Mayor	English News
[ March 25, 2019 ] Saahid Maxamuud Cali oo loo doortay duqa cusub ee Gaalkacyo	Puntland
[ March 24, 2019 ] Golaha deegaanka Gaalkacyo oo lasoo doortay, dumarka oo helay lix xubnood	Puntland
[ March 24, 2019 ] Madaxweynaha Puntland oo taliye booliis u magacaabay gobolka Bari	Puntland
[ March 23, 2019 ] Ugu yaraan 15 qof oo ku dhintay weerar ay Al-Shabaab ku qaaday xarun wasaaraddeed oo kutaala Muqdisho	Somalia
HomeAuthorsAbdi Omar Bile
Articles by Abdi Omar Bile
About Abdi Omar Bile
Senior Managing Editor at Puntland Mirror and Co-founder of The Site. His Special Passion is Covering Topics Related to Security and Business.You can follow him on Twitter @Abdiomarbile
June 8, 2016 Abdi Omar Bile 0
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa sheegay in dalkiisa uu diyaar u yahay inuu aqbalo qaxootiga ka imaanaya xerada Dhadhaab sidoo kalena ay ka qaybqaadan karaan dib u dhiska dalka. Isagoo ka hadlayay shir jaraaid […]
Somalia President Hassan Sheikh Mohamoud says his country is ready to receive refugees from the Dadaab camp so they can participate in nation building. Speaking at a joint press conference with President Uhuru Kenyatta at […]
Galkayo-(Puntland Mirror) chairwoman of Puntland’s Galkayo women association shot dead by unidentified gunmen on Wednesday evening in Galkayo town, residents said. Dhudi Yousuf Adan, a chairwoman of Galkayo women association, was shot dead by unidentified […]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Guddoomiyihii ururka haweenka Gobolka Mudug ee Puntland Dhudi Yuusuf Aadan ayaa caawa lagu dilay gudaha magaalada Gaalkacyo. Marxuumada ayaa waxaa toogasho ku dilay koox baastoolado ku hubaysan wakhtigii maqribka kadib sida ay Puntland […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa maanta kusoo laabtay magaalada Boosaaso kadib booqasho afar maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalka Isutaga Imaaraatka Carabta. Madaxweynaha ayaa hadal kooban oo […]
US president Barack Obama will miss Muhammad Ali’s funeral on Friday due to a clash with his daughter’s high school graduation. Obama and his wife Michelle will be in Washington for their daughter Malia’s ceremony, […]
Washington-( Puntland Mirror )Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ka maqnaan doona aaska Jimcada dhacaya ee Maxamed Cali isagoo ka qaybgali doona xaflada qalinjabinta gabadhiisa. Obama iyo Xaaskiisa Michelle ayaa Washington uga qaybgali doona xaflada […]
Nigeria have lost one of her biggest sporting heroes as former Super Eagles coach Stephen Keshi, 54 died on Tuesday. Keshi, who won the Africa Cup of Nations and player and coach passed on in […]
June 7, 2016 Abdi Omar Bile 0
Madaxweynaha Kiinya Uhuru Kenyata iyo dhigiisa Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa wadahadal labo geesood ah ku yeeshay aqalka madaxtooyada, Nayroobi. Wadahadalka u dhaxeeya labada Madaxweyne ayaa diirada lagu saaray go’aanka xirida xerada qaxootiga ee Dhadhaab, […]
President Uhuru Kenyatta and his Somalia counterpart Hassan Sheikh Mohamud on Tuesday held bilateral talks at State House, Nairobi. The talks between the two Presidents focused on the decision to close the Dadaab refugee camp, […]
Golaha deegaanka Gaalkacyo oo lasoo doortay, dumarka oo helay lix xubnood
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa lasoo doortay maanta oo Axad ah. Xubnaha golaha cusub ee Gaalkacyo ayaa ka kooban 31, kuwaasoo kasoo jeeda qabiilooyinka degan magaalada. Xubnaha cusub ayaa la dhaarshay isla maanta [...]
Madaxweynaha Puntland oo taliye booliis u magacaabay gobolka Bari
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Xuseen Cali Maxamed u magacaabay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Bari, sida lagu sheegay digreeto xafiiska madaxweynaha ka soo baxday Sabtidii. Xuseen ayaa badali doona Cabdixakiin Xuseen [...]
Qorshaha Dhagarta leh oo Farmaajo u degeyo Axmed Madoobe
Qoraal uu ku qoray Jariirada Daily Nation oo ku soo baxay September 2014, ayaa Nicholas Kay oo markaas ahaa Wakiilka Xoghaya Guud ee Qaramadda Middoobey ee Soomaaliya wuxuu ka markhaanti kacay cadaymaha xoogan ee muujinaya [...]